बेलायतका एक जोडीको महँगो डिभोर्स ! अदालत धाउँदा-धाउँदै सकियो ९ करोड « Khabarhub
बेलायतका एक जोडीको महँगो डिभोर्स ! अदालत धाउँदा-धाउँदै सकियो ९ करोड
The couple consultingalawyer about agreement on the divorce.
एजेन्सी- विवाहित जोडीबीच मेलमिलाप नहुँदा घरबार मात्र बिग्रिँदैन सम्पत्ति पनि स्वाहा हुने गरेका घटना हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं ।
हालै बेलायतमा एउटा यस्तै घटना भएको छ । विवाहको शुरुवाती दिनमा यो जोडीको जीवन सुखमय बितिरहेको थियो । उनीहरुका तीन सन्तान छन् ।
बिहेको २२ वर्षपछि श्रीमान श्रीमतीबीच मनमुटाव भयो । विवाद यतिसम्म बढ्यो कि उनीहरु सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगे ।
दम्पती सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुगे । सम्बन्धविच्छेदका क्रममा दुवैले सम्पत्तिको अधिक हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि उनीहरुको अधोगति शुरु भयो ।
दुबै जना आफ्नो दाबीबाट पछि नहट्दा सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रिया लम्बियो । अदालतमा मुद्दा चलिरह्यो । मुद्दा किनारा लाग्न समय झण्ड २ वर्ष लाग्यो । यस क्रममा वकिलको पारिश्रमिक तिर्ने क्रममा उनीहरुले ६ लाख पाउण्ड (९ करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्चिनुपर्‍यो । यो अवधिमा उनीहरुले घर समेत बेच्नुपर्‍यो । क्रेडिट कार्डको ऋण तिर्न अझै बाँकी रहेको डेलिमेलमा प्रकाशित समाचारमा जनाइएको छ ।
गत शुक्रबार यी दुईको सम्बन्धविच्छेद भयो । करोडौंको सम्पत्तिका मालिक यी दम्पतीको मुद्दामा शुक्रबार अन्तिम फैसला आउँदा दुवैले बराबर जनही साढे ७ लाख रुपैयाँ मात्र पाए । घटना बेलायतको राजधानी लण्डनको हो । यी श्रीमान श्रीमतीको पहिचान सार्वजनिक गरिएको छैन ।
५३ वर्षका श्रीमान र ५० वर्षकी श्रीमती एक केयर होमका मालिक थिए । छोराछोरीहरुसँग विदा मनाउन बाहिर गइरहन्थे । छोराछोरीको राम्रो पढाइको लागि ठूलै रकम खर्च गरिरहेका थिए ।
दम्पतीसँग व्यक्तिगत नम्बर प्लेट भएको १४ हजार पाउण्ड (२१ लाख नेपाली रुपैयाँ) पर्ने मर्सिडिज गाडी पनि थियो ।
दम्पत्ति छुट्टिएपछि केयर होम बन्द भयो । श्रीमान बेरोजगार भए । उनले प्लम्बिङ कम्पनीमा जागिर गर्न थाले जहाँ उनले वार्षिक करिब ३२ हजार पाउण्ड कमाउँछन् ।
मुद्दा चलिरहँदा उनको सम्पत्ति त सकियो नै डेबिट कार्डबाट १ लाख २२ हजार पाउण्ड (झण्डै २ करोड रुपैयाँ) ऋण पनि थपियो ।
अदालतमा कूल १३ सुनुवाइ भए । पाँच दिन ट्रायल पनि चल्यो । श्रीमानले ४ पटक अपिल कोर्ट र हाइकोर्टमा अर्जी दिएका थिए तर सबै अर्जी खारेज गरिएको थियो ।
हाइकोर्टका न्यायाधीश रोबर्ट पीलले भनेका थिए कि घर बेचेर ६ लाख ३० हजार पाउण्ड प्राप्त भएको थियो ।
न्यायाधीशले भने ‘यति ठूलो खर्चमा विश्वास गर्न मुस्किल छ तर यो वास्तविकता हो । यस्तै फैसला भएका अन्य मुद्दाहरु पनि हुन सक्छन् तर यति खराब नहोलान् । यो केस ती दम्पतीको लागि चेतावनी हो जो कानुनी दाउपेचमा सम्पत्ति खर्च गर्छन् र उनीहरुसँग केही बाँकी रहँदैन । उनीहरुले कमाइभन्दा धेरै खर्च गरे र ऋणी भए ।’
प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०७७, सोमबार १० : ११ बजे